Mayelana NATHI - Fine Glove Medical Technology Co., Ltd.
"I-Anhui Fine Glove Medical Technology Co., Ltd. "yinkampani esebenzisana nayo ye"I-HangZhou Joyplus Co., Ltd. "esungulwe kusukela ngo-2006 eHangzhou China.
I- "Fine glove company" ekhethekile ekukhiqizeni nasekuthumeleni amagilavu ​​e-nitrile alahlwayo ukuze ahlolwe ngodokotela kanye nokusetshenziswa kwezinjongo eziningi. sineziqu kuzo zombili izigaba ukukhiqizwa kwemishini yezokwelapha i-I & II, nethimba elihle kakhulu elinolwazi lokukhiqiza nokulawulwa kwekhwalithi. Isabelo ngasinye sezimpahla sizohlolwa ngokuqinile ngaphambi kokulethwa ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi ihlala ilungile njengoba kuceliwe.
Ifektri ye- "Fine Glove" icishe ibe yi-400KM kude neShanghai, kulula kakhulu ukuza ngesitimela okuthatha kuphela amahora amabili, samukela ngemfudumalo amakhasimende ukuthi azosivakashela.
Njengoba sine "Glove Emnandi" njengophawu lwethu lokuhweba olubhalisiwe, ikhasimende kuqala nekhwalithi kuyinto yethu yokuqala ebaluleke kakhulu. Inkampani yethu izimisele ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezinhle kakhulu futhi ithuthukise futhi yabelane ngekusasa elingcono namakhasimende ethu ndawonye.
Ifektri yethu ibikufanelekela ukuthola i-ISO13485 (uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi yedivayisi yezokwelapha), i-BSCI (ukuhlolwa kwamalungelo omphakathi), nemikhiqizo yethu ibinazo zombili Izitifiketi ze-CE ne-FDA-510K, imikhiqizo nayo idlulise ukuhlolwa kwe-EN455-1 ~ 3, EN374, ASTM D6319-19 , kanye nokuhlolwa kokuthintana kokudla jikelele ngokuya nge-Europe ne-FDA ejwayelekile.
Ifektri "Fine Glove" etholakala e-Chuzhou City Anhui China enabasebenzi ababalelwa ku-150 namasethi ayi-10 wemigqa yokukhiqiza igilavu ​​ye-nitrile ethuthukile, sibuye samisa amamitha-skwele angama-500 e-workshop engenalo uthuli futhi abasebenzi bagqoke ama-facemasks namagilavu ​​lapho ukusebenza, ukuqinisekisa ukuthi iqoqo ngalinye lezimpahla livikelwe kahle futhi lihlanganiswe ngokuphelele.
Nakekela ikhwalithi, unakekele insizakalo, unakekele amakhasimende ethu, unakekele abantu. I- "Fine Glove" inikezela ngemikhiqizo emihle ngokuhlosiwe: Ukufuna njalo ukunakekelwa okungcono komuntu.
IGLOVE ELIHLE linikeza ukukhiqizwa kwenkontileka, izimpahla zomkhiqizo wezokwelapha kanye nezinsizakalo ezihlobene Nezinsiza Zokuvikela Zomuntu kanye ne-OEM yomkhiqizo wezokwelapha.
Sisebenza ndawonye ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu. Silikhulisela leli bhizinisi hhayi ukuzizuzela thina, kodwa ngenxa yobuhlobo be-win-win.
Senza ngobuqotho nangokwethembeka. Asikutholi kahle ngaso sonke isikhathi okokuqala, kepha sihlala sikulungisa.
Sinikezela ngemikhiqizo evelele nekhwalithi engenakuqhathaniswa ukuthi, ndawonye, ​​iletha inani elikhulu kumakhasimende ethu nakubasebenzisi bokugcina.